AKHRISO: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Doorashada Canada - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAKHRISO: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Doorashada Canada
AKHRISO: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Doorashada Canada
Ottawa (JigjigaOnline) – Shacabka Canada ayaa doorasho u dareeri doono 21-ka bisha October, si ay u go’aansadaan in markale ay fursad siinayaan xisbiga ra’iisul wasaaraha hadda, Justin Trudeau iyo in kale.
Haatan waxaa si weyn u socda ololaha doorashada Canada, waxaana jira shan arinmood oo ay tahay in la ogaado marka laga hadlayo doorashada Canada.
1.Afti ka dhan ah Trudeau
Kadib markii uu guul taariikhi ah soo hooyay afar sano ka hor, hogaamiyaha xisbiga Libralka ee dalka Canada Justin Trudeau oo 47 sano jir ah,ayaa mar labaad u sharaxan jagada ra’iisul-wasaarenimo.
Wuxuu fuliyay ballanqaadyo dhowr ah sida sharciyeynta daroogada xashiishadda iyo barnaamijyo waxtar u leh carruurta laakin ma uusan fulin ballanqaadyadii ugu waaweynaa oo uu sameeyay.
Mr Trudeau waxaa lagu helay dambi ah inuu jabiyay qanuunka federaalka kadib markii uu dalxiis u tagay goob uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga Aga Khan oo ku taala Hindiya.
Tredeau, wuxuu dadka intooda badan kaga yaabiyay dhar xirashadiisa, gaar ahaan dharka hidaha iyo dhaqanka Hindiya.
Wuxuu sidoo kale dhaleeceyn la kulmay iibsashada dhuun shidaal oo ah lacag dhan C $ 4.5bn ($ 3.4bn; £ 2.8bn) si ay gacan uga geysto ballaarinteeda iyo in uusan ka laaban heshiiska hubka ee Sacuudi Carabiya.
2. Waxaa jira wajiyo cusub.
Hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ee Canada Andrew Scheer ayaa rajeynaya inuu xilka kala wareegi doono ra’iisal wasaaraha oo ra’iisul wasaare loo doortay sanadkii 2017-kii.
Musharixiinta kale ee u tartamaya xilka ra’iisul wasaarenimo waxaa kamid ah Jagmeet Singh oo ka socda xisbiga New Democratic Party iyo Elizabeth May oo ka socota xisbiga Green Party of Canada.
3. Isbedelka cimilada
Arimaha dhaqaalaha iyo isbedelka cimilada ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan dadka ree Canada doorashada sanadkan.
Dhaqaalaha dalka oo aan wanaagsaneyn, iyo sicir bararka oo aad u sarreeya ayaa laga cabsi qabaa inay sababto sare u kac ku yimaado qiimaha shidaalka
4.Yaa ka horreeya, yaana ka dambeeya?
Wuxuu taageera ka haystaa xisbiga Liberal sida sanadkan la saadaaliyey. Codbixinta guud ee dalkan waxay muujineysaa iney xisbiyada Liberal iyo Conservative ay aad isugu dhow yihiin labaduba ay wakhti xaadirkan sumacad shacabka ay ka haystaan taageera dhan 305.
Xisbiga Conservative ayaa ku horreeya deegaannada ay taageerayaashiisa ku badan yihiin ee Saskatchewan iyo Alberta, halka goob doorashooyin qaarkoodna ay tilmaamayaan inuu xisbiga Liberal uu ku horreyn karo sida Quebec iyo Ontario, gobahaasi oo ah halka dagaalka ugu weyn uu labada xisbi ku dhexmari doono.
Xisbiga NDP oo kaalinta seddexaad ku jirana waxaa la filayaa qayaas ahaan inuu helo codka shacbaka Canada 14%.
Hase yeeshee natiijooyinka doorashada iyo sida ay xisbiyadu ugu soo baxaan waxay ku xiran tahay ololaha doorashada shanta usbuuc ee soo socota soconeysa taasoo noqon doonta mid ay codbixiyeyaasha ay ku go’aansadaan cidda ay codkooda siinayan.
5. Fursad fiican ayay u noqon kartaa xisbiga Green Party
Xisbiga Green party xilligi xagaaga waxaa ka dhex taagna guux badan. Balse taariikhda xisbiga codki ugu sarreeyey ayuu helay sida ay tilmaamayaan darasado la sameeyeyna waxay sheegayan inuu xisbiga rajeeynayo kurasta uu baarlamaanka ka helay iney laba jibbaaraan.
“Waxaa jira “rajo taxaddar u bahan” marka loollanka dooarshada la guda galo”,ayuu yiri Saskatchewan and Alberta oo Maareeya ololaha doorashada xisbiga. Xisbiga Green wuxuu isku dayayaa inuu siyasadda uu door ku yeesho oo ay codbixiyeyaasha codkooda siiyaan “balse taa waxay leedahay xoogaha Khatar ah” ayuuna sii raaciyey.
Labada musharrax ee kale ee diiddan rajada fog ayaa waxay yihiin Jody Wilson Raybould iyo Jane Philpott
Waxayna labaduba ahaayeen laba wasiir oo caan ah oo ka wada tirsana golaha wasiirrada xisbiga Liberal, inta aayan isu casilan kala duwanaasho soo kala dhex gashay siyaasadda Mr Trudeau.
Waxayna hadda dorashada uga qayb galayan si madax bannaan oo aan xisbi u taagneen, waxayna labadooduba goobihi laga doortay ay kaga soo baxeen iyaga oo xilligaasi matalayey xisbiga Liberal, iyaga oo uu xisbigu ololahooda wax taageera oo sidaa u weyn uu ka siinin.
Erdogan oo Maraykanka ka codsaday inuu dalkiisa ka iibiyo Gantaallo